I-Wildflower Farmhouse e-Dripping Springs - I-Airbnb
I-Wildflower Farmhouse e-Dripping Springs
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lala
Iklanywe ku-acre eyi-1, i-The Wild Flower Farmhouse iyindawo ekahle kakhulu yokuhlola isifunda esihle segquma. Bukela izimuncumuncu zidlula zisuka emphemeni ogoqene noma ujabulele ukugaya ngaphansi kwezibani zezintambo egcekeni elingemuva. Indlu yasemapulazini isanda kulungiswa futhi iziqhayisa ngekamelo elivulekile lokuqala elinombhede omkhulu. Umqondo ovulekile wendawo yokuhlala unophahla olukhanyayo olumhlophe, izindawo zaphansi zokhuni eziqinile kanye nemibala yasemaphandleni. Jabulela ukulungiselela ukudla ekhishini elinakho konke elinamatafula e-quartz kanye nezinto zikagesi zensimbi engagqwali. Indawo inethezekile futhi inethezekile ukuhlinzeka ngokuhlala ekhaya!
Iklanywe ku-acre eyi-1, i-The Wild Flower Farmhouse iyindawo ekahle kakhulu yokuhlola isifunda esihle segquma. Bukela izimuncumuncu zidlula zisuka emphemeni ogoqene noma ujabulele ukugaya ngaphansi kwezibani zezintambo egcekeni elingemuva. Indlu yasemapulazini isanda kulungiswa futhi iziqhayisa ngekamelo elivulekile lokuqala elinombhede omkhulu. Umqondo ovulekile wendawo yokuhlala unophahla olukhanyayo olumhlophe, iz…
4.98 (izibuyekezo ezingu-89)
Leli khaya lingamakhilomitha angu-1.5 enyakatho yendawo engokomlando yedolobha lase-Dripping Springs enamabha, izindawo zokwenza utshwala, izindawo zokudlela nezitolo. Yizwa umculo obukhoma e-The Barber Shop, thatha ikhofi e-Mazama bese ubhrawuza izitolo zakudala nezipho e-Mercer Street. Kukhona isitolo esilula ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo kanye ne-internet (ukudla) phakathi nemoto emfushane. Ikhaya litholakala kuzo zonke izindawo zomshado edolobheni! Cishe imizuzu engu-20 ukuya e-Reimer 's Ranch, i-Hamilton Pool ne-Pedernales Falls State Park.
Imizuzu engu-35 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni